Iyada oo ay la socoto terminaalka: Ku soo dejiso degel dhameystiran Wget | Laga soo bilaabo Linux
Ma jiraan wax ka fiican Wikipedia si loo sharaxo waxa qalabkani ka kooban yahay:
GNU Wget waa qalab bilaash ah oo softiweer ah oo u oggolaanaya soo dejinta waxyaabaha ku jira serverka shabakadda qaab fudud. Magaceedu wuxuu ka yimid World Wide Web (w), iyo "get" (Ingiriisiga hel), tan macnaheedu waa: ka hel WWW.
Waqtigan xaadirka ah waxay taageertaa soo dejinta iyadoo la adeegsanayo hab maamuuska HTTP, HTTPS iyo FTP.
Ka mid ah qaababka ugu fiican ee ay bixiso wget waxaa jira suurtagal ah in si fudud loo soo dajiyo muraayadaha isku dhafan si tartiib tartiib ah, u beddelashada xiriiriyeyaasha si ay u muujiyaan waxyaabaha HTML ka jira gudaha, taageerada wakiillada ...
Waa run inay jiraan codsiyo kale oo naga caawiya inaanu qabanno shaqada noocan ah sida itinrack ama xitaa kordhin loogu talagalay Firefox sida Buug-xogeed, laakiin ma jiro wax la mid ah fududaanta terminal 😀
Waxaan xiiseynayay filimka: Shabakadda Bulshada, sida dabeecadda Mark_Zuckerberg isticmaal weedha: «Xoogaa sixir wget ah«, Markii aan ku soo dejisan lahaa sawirada Facemash 😀 waana run, wget wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sixir ku sameyso xuduudaha saxda ah.
Aynu eegno dhowr tusaale, aan ku bilowno isticmaalka fudud ee aaladda.
Si aad u degto bog:
Si aad u soo dejiso bogga oo dhan si isdaba-joog ah, oo ay ku jiraan sawirro iyo noocyo kale oo xog ah:
Oo halkan waxaa imanaya sixirkii. Sida ay noogu sharaxayaan maqaalka Aadanaha, goobo badan ayaa xaqiijiya aqoonsiga biraawsarka si loo isticmaalo xayiraado kala duwan. Iyadoo wget waxaan uga gudbi karnaa sidan soo socota:
Ama sidoo kale waan ku hakan karnaa inta u dhexeysa bog kasta, haddii kale milkiilaha goobta ayaa laga yaabaa inuu ogaado in aan gebi ahaanba la soo degsaneyno bogga wget.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Iyada oo ay la socoto terminaalka: Ku soo dejiso degel dhameystiran Wget
Ma jiraan wax soo degsada kaliya sawirada xd?
Taasi waan aqriyay maskaxdaada hahahaha
nin wget ????
Noloshu aad ayey u gaaban tahay in la akhriyo ragga.
Noloshu aad ayey u gaaban tahay si maskaxda looga buuxiyo macluumaad, laakiin wali waa ansax in la isku dayo 🙂
Macluumaadka qiimahoodu waa kala bar, waxaan door bidaa inaan ku buuxiyo dumarka, ciyaaraha iyo lacagta hadii ay suurta gal tahay XD.
Marwalba waad jahwareersan tahay inaad ka fikirto haweenka. Hada laga bilaabo waxaad dhageysan doontaa Dadee Yankee, Don Omar iyo Wisin Y Yandel sida KZKG ^ Gaara ayaa dhageysanaya.
Naftaada sifiican ugu dadaal naftaada, taas oo ah waxa ugu muhiimsan noloshan
Waxaa jira waxyaabo ka qiimo badan lacag ... tusaale ahaan, inaad taariikhda ku jirto, isbeddel aad sameyso, lagugu xasuusto inta aad ku guuleysatay inaad wax ku biiriso adduunka; mana ahan lacag intee le'eg ayaad haysatay markii aad dhimatay 😉
Isku day inaadan noqon nin guuleysta laakiin nin geesi ah, Albert Einsein.
Mise tuugsade ku hoos nool buundada ma sameyn karaa taas isagoo aan haysan dinaar?
Geesinimo, waxaan soo maray xilligeygii reggaeton oo sifiican uma sii jirin, taasi waxay aheyd sanado kahor, kaliya waxaan dhagaystaa muusikada Japan iyo muusikada caadiga ah, iyadoo lacagta… aan ka shaqeyneyno :).
Waxba igama gelin in la i xasuusto, garaad, markaan dhinto waan dhimanayaa oo kuwa kale waan khiyaaneeyaa, maxaa yeelay xitaa ma awoodi doono inaan ogaado waxa ay aniga ila qabaan. Maxay mudan tahay in lagu xasuusto laakiin waad ku faani kartaa xD.
Si aad u soo dejiso nooc gaar ah oo faylal ah waxaad isticmaali kartaa miirayaasha:
Faa'iido, haddii aad isku dareyso bog aad u ballaadhan, waxaa lagugula talinayaa inaad ku sameyso wakiil sida tor, maxaa yeelay haddii kale waxaa jira bogag gaar ah oo gaaray tiro cayiman oo cod ah oo isku xigta, xannibista IP-gaaga dhowr saacadood ama maalmo .
Waqtiga kale ee igu dhacay markaan rabo inaan isku xidho wiki.
Kordhin, oo aan ugu adeegsado Firefox, waxay soo degsataa kaliya sawirrada; waxaa loo yaqaan "Keydso Sawirada 0.94"
eh su'aal hehe meeye faylalka aan soo dejiyo oo la keydiyay? Waxay rabaan inay i dilaan, sax? LOL
Faylasha waxaa lagala soo baxaa galka aad ku dhex taal terminalka waqtiga la fulinayo wget 😉
Ahh, uma maleynaynin in wget uu yeelan karo adeegsi xiisa badan… Hada, oo ku saabsan adeegsiga geesinimada sheegaayo… Erayo…
Ma jiraa qof garanaya haddii ay jirto WordPress-ka-fur-ka ka hortagaya in Wget soo dejiyo bartaada?
Hagaag, wey ila fiicantahay aniga !! Mahadsanid
Aad u fiican, aan isku dayno inaan aragno sida, ugu mahadcelinta wax ku biirinta.
In kasta oo aan isku arko inaan ahay qof bilow ah tani way ii fududahay hadda waxaan isku dayi doonaa inaan ku dhex daro waxyaabo kale oo aan arko waxa ay bixiso….
Ku jawaab lyairmg
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto maxaa yeelay waa Isniinta, Diseembar 3, 2012
Mashruuca la horumarinayo waa kuwan soo socda:
Dib-u-dejinta degel iyadoo la hagaajinayo tixraacyada href.
1.-Markaad tixgelinayso degel internet ah, ku soo dejiso bogga oo dhammaystiran galka deegaanka adoo isticmaalaya amarka wget. Iyo adoo adeegsanaya qoraalka qoraagaaga, ku samee hawlgallada soo socda:
1.2.-Mar alla markii mid kasta oo ka mid ah waxyaabahaas la raro, dib u habeyn ku samee tixraacyada ku aaddan meelaha maxalliga ah ee kheyraad kasta ee goobta yaal.
1.3.-Dhaqaaq adeegaha shabakadda, oo isku hagaaji galka asalka ah ee keydinta websaydhka ay ku taal sida galka asalka ah ee server-ka deegaanka.
1.4.-Xusuusin: amarka wget waxaa loo isticmaali karaa oo keliya xulashooyinka soo socda:
–Qormooyinka loo baahan yahay
Haddii sababo jira awgood amarro badan loo baahdo, isticmaal kuwa loo baahan yahay.
Si aad halkan u soo degsato waxaan u maleynayaa inaad xalka ku haysato boostada, hadda ... inaad u guurto faylasha oo aad beddesho waddooyinka, waa inaan sidan oo kale ku sameeyaa inyar ka hor shaqadayda, waxaan kaaga tegayaa qoraalkii aan adeegsaday: http://paste.desdelinux.net/4670
Waad wax ka beddeleysaa iyada oo la tixgelinayo nooca feylka iyo waddada, taasi waa, sida .HTML-yada goobtaadu u samaysan yihiin iyo taas.
Kani maahan xalka 100% maxaa yeelay waa inaad wax kadiyaaris ah ama isbadal sameysaa laakiin, waxaan damaanad qaadayaa inay tahay 70 ama 80% dhamaan shaqooyinka 😉
Mahadsanid KZKG ^ Gaara wax weyn ayey ii taray
Marwalba waan adeegsanaaithinck Buugga xaashiyaha loogu talagalay dab-damiska waan isku dayi doonaa, laakiin waan jeclahay wget. Mahadsanid!
Nin yahow, amarka aniga ima uusan shaqeysan ... kani si fiican buu ii shaqeeyey:
wget –random-sug -r -p -e aalado = off -U mozilla http://www.example.com
Jawaab Daniel PZ
Aad baad u mahadsantahay! Waxaan ugu adeegsaday halbeegyada uu soo jeediyay Daniel PZ wax dhib ahna kuma qabin 🙂
Ruben Almaguer dijo
Mahadsanid wiil, waxaan ku sameeyay WGet oo ku saabsan kumbuyuutarkeyga Linux laakiin ma aanan ogeyn sida loo sameeyo terminal. salaan
Jawaab Rubén Almaguer
halkee ku haysaa bogagga?
Ku jawaab pistonudo
Meesha aad terminalku ka furan yahay. Marka ugu horeysa, galka galka isticmaalahaaga, illaa aad tilmaamto waddo kale.
Sidoo kale soo dejiso xiriiriyeyaasha? Markaa haddii uu jiro xiriir pdf ama dukumiinti kale, adiguna ma soo degsataa?
Maxaan sameyn karaa si aan u soo dejisto balooggeyga oo dhan, waan isku dayay waxa aanan arki karinna waxay u muuqdaan inay ku jiraan lambarro ama la xanibay, in kasta oo ay saacado badan qaadatay inaan soo dejiyo laakiin kaliya bogga hore ayaa la akhrin karaa, kaas oo aan kugula talinayo inaad soo dejiso my blog, mahad raul.
hello, shaki waa suurtagal in la beddelo xiriiriyeyaasha gudaha html, si hadhow loo awoodi karo in loo dhex maro bogga la soo dejiyey sidii iyadoo asal ah.
Maxaa dhacaya waa anigoo soo dejinaya bogga markaan furayna faylasha la soo dejiyey maan qaadan .css ama .js oo xiriiriyeyaasha bogga waxay igu hogaaminayaan bogga internetka.
Chakra 2012.02.12 la heli karo!